shankar school | नुवागी
भक्तपुर । सूर्यविनायक — ४, भक्तपुरस्थित शंकर नेशनल स्कुलमा कक्षा ९ का विद्यार्थीहरुद्वारा कक्षा १० का दाईदिदीहरुलाई बिदाई गरेको छ । एसईई २०७६ को लागि केक काट्दै टिका, खादा र मायाको चिनोको साथमा शुभकामना दिएका थिए । कार्यक्रममा कक्षा ९ का विद्यार्थीहरुले विभिन्न नृत्य,...
भक्तपुर । भक्तपुरस्थित शंकर नेशनल स्कुलले खेलकुद सप्ताह आयोजना गरेको छ । उक्त कार्यक्रम चार दिनको रहने छ । पहिलो दिन सप्ताहको उद्घाटन समारोह गरिएको छ जसमा विद्यार्थीहरुले आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गरेका थिए । खेलकुदको पहिलो दिनको शुरुवातमा प्रि स्कुलका अभिभावकहरुको सहभागीतामा खेल सुरु...
भक्तपुर । भक्तपुर दधिकोटस्थित शंकर नेशनल स्कुलका प्रिप्राइमेरीका विद्यार्थी भाईबहिनीहरु पाइलट बाबामा शैक्षिक भ्रमणका लागि गएका छन् । करिब ९० जना विद्यार्थीहरुको सहभागीता रहेको उक्त भ्रमणमा विद्यार्थी भाइबहिनीहरुलाई पाइलट बाबा मन्दिरमा दर्शन गराई, चौरमा लगेर रमाइलो गराइएको थियो । विद्यार्थीहरुलाई खाजा खुवाएर, विभिन्न किसिमका...
भक्तपुर । भक्तपुरस्थित शंकर नेशनल स्कुलद्वारा आयोजना गरिएको कराते–ग्रेङिङ २०७६ कराते प्रशिक्षक ईश्वर थापाको रोहोवरमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा कराते तालिम लिने विद्यार्थीहरुको प्रतिभा हेरेर र मूल्याङ्कन गरेर ती विद्यार्थीहरुको ग्रेङिग गरिएको थियो । कार्यक्रममा विद्यार्थी भाइबहिनीहरुलाई खेलकुदद्वारा पनि अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने...
In my life, the real victory for me was owning my expectation to be fulfilled and this statement gone truth when I participated being member of my football team in tournament and won the tournament. It had becomeareal victory for me. I...
भक्तपुर । सुर्यविनायक नपा दधिकोटस्थित शंकर नेशनल स्कुलद्वारा बालदिवस २०७६ आयोजना गरिएको छ । कार्यक्रममा कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा १० सम्मका विद्यार्थी भाइबहिनीहरुलाई विभिन्न विधाहरुमा सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रममा मोस्ट डिसिप्लेन स्टुडेन्ट, मोस्ट हाइजेनिक स्टुडेन्ट, मोस्ट पंकच्योल स्टुडेन्ट, मोस्ट एक्टिभ स्टुडेन्ट र मोस्ट भरस्टायल...
भक्तपुर । भक्तपुर सूर्यविनायकस्थित शंकर नेशनल स्कुलले गुरु पूर्णिमा मनाएको छ । कक्षा ८,९ र १० का विद्यार्थीहरुको आयोजनामा विद्यार्थीहरुले गुरु पूर्णिमा मनाएका हुन् । कार्यक्रममा विभिन्न कला प्रस्तुतिहरुले कार्यक्रम रोमाञ्चक भएको विद्यालयका प्रिन्सिपल शरण चौलागाईले बताए । विद्यार्थीहरुबाट शिक्षक शिक्षिकाहरुलाई टिका, खादा र...